Banyere Anyị - Dongguan Allwin sọọsọ Co., LTD
Dongguan Allwin sọọsọ Co., LTDtọrọ ntọala na 1999. Ọ dị na Wan Jiang Mpaghara nke obodo Dongguan, mpaghara Guangdong. Anyị guzobere Allwin Industry (HK) International Limited na 2009. Ninghai Allwin agụmakwụkwọ Co., LTD e guzobere na 2010. Anyị ụlọ ọrụ na-pụrụ iche na ụlọ ọrụ n'ichepụta ụlọ ọrụ, isi ngwaahịa na-ịcha ute, rotary cutter, akwụkwọ trimmer, akwụkwọ ntụmadị, akwụkwọ fastener, akwụkwọ shredder, laminator. Nrụpụta dị elu na ọnụahịa dị ọnụ ala, na-eme ka ngwaahịa anyị dị mma nke ọma, ọnụahịa dịkwa asọmpi.
Anyị ụlọ ọrụ nwere magburu onwe ọhụrụ ngwaahịa imewe ike anyị nwere onwe anyị R&D ngalaba. Anyị na-enye ngwaahịa nhazi maka ndị ahịa anyị. Anyị nwere ike imeghe a ọhụrụ ebu maka ahịa ọhụrụ ngwaahịa n'ichepụta, na-agbaso azụmahịa nkọwa. Nabata OEM imekọ ihe ọnụ. Ọtụtụ Punchers ndị ụlọ ọrụ anyị mepụtara abụrụla aha mba dị iche iche.
Companylọ ọrụ anyị debara aha "Allwin" nwere ọtụtụ ndị nnọchi anya n'ọtụtụ mpaghara obodo na obodo, ọ torola ụdị akwụkwọ agụmakwụkwọ ama ama. Anyị nwere ndị nnọchi anya mpaghara ụfọdụ nke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Amerịka.
Anyị enterprise omenala:
Theghọ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ na-agbanwe agbanwe na-eduga ụlọ ọrụ.
Ndi ụlọ ọrụ na ndị ọrụ na-etokọ ọnụ, mepụta ọnụ ahịa maka ndị ahịa, ma were ọrụ maka ọha mmadụ.
Eziokwu na ikike, imepụta ihe na ịtụnanya, nwee obi ekele na ekele.
Nlere ụlọ ọrụ anya
Nwoke ọ bụla bụ talent na aka ya.
Nkà ihe ọmụma azụmahịa
Designdị ngwaahịa kachasị elu, arụmọrụ dị oke ọnụ ahịa dị elu, ọrụ ndị ahịa bara nnukwu uru.